Yusuf Garaad: La sheekeysi Bashiir Mursal Ciise Bootaan
Bash, waa sida uu jecelyahay in loogu yeeree, wuxuu igu qaabbilay goobtiisa shaqada oo ah Hotel Ibis, oo ku yaal bartamaha London. Shaah ayuu ii shubay. Miis gaaban oo na dhex yaallay wuxuu soo saaray baaldi ay xog kala duwani ku xardhan tahay. Waa baaldiga lagu ururiyo lacagta Walaal Afuri.
Sheekadeennu sidan ayay u dhacday:
'Walaal Afuri' waa maxay?
Walaal Afuri waa Barnaamij ku saabsan in lacag saddaqa ah laga ururiyo Soomaalida dibadda oo isla maaalinta la ururiyo loo diro Soomaaliya si maskiin soomman uu ugu afuro.
Sideed ku soo xushaan miskiinka aad lacag siineysaan?
Wakiillo gudaha Soomaaliya jooga ayaa noo soo sheega.
Lacagta aad siisaan halkii qof waa meeqa?
Waxaan bixinnaa ugu yaraan $100 ama $150.
Guud ahaan lacagta aad ururisaan ee aad sii qeybisaan waa meeqa?
Sannadkii noogu horreeyay oo ah 2013 waxaa soo xarootay 21,000 oo doollarka Mareykanka ah. Dhammaanteeda waan bixinnay. Sannadkii 2014 waxaa soo xarootay in ka badan 72,000 oo dollar. Sidaa oo kale waan wada qeybinnay.
Sannadkaan meeqa ayaad is leedihiin qabta?
Waxaa noo qorsheysan $150,000 oo dollar, laakiin waxaan rajeyneynaa sidii sannadihii ka horreeyay in aan bartilmaameedkeenna ay aad uga badnaan doonto lacagta noo soo xaroota.
Waa lacag aad u tira badan. Maxaad caddeyn haysaan in lacagtaasi ay gaartay dadka loogu talo galay?
Waxaan nahay hey’ad samafal oo ka diiwaan gashan dalkan UK. Qof kasta oo lacag ururinaya baaldiga uu sito waxaa ku qoran nambarka hey’adda, isaguna shakhsi ahaan nambar ayuu leeyahay iyo aqoonsi. Waa sanduuq xiran. Goobta uu keeno saddex ruux oo kale ayaa fadhiya iyaga ayaa tirinaya lacagta. Isla maalintaasna waa la dirayaa. Lagamana bixin karo wax ka badan khidmada Xawaaladdu ay ku direyso.
Qaabkee howsha u Agaasintaan si la idiin aammino?
Lacagta midna baaldi ayaa lagu guraa midna Online ayaa lagu bixiyaa. Annaga waxaa noo yaalla in aan lacagta la soo qabtay wax kale laga bixin marka laga reebo khidmada Xawaaladda. Inta kale toos ayaan u dirnaa. Kharash kale oo laga jaraa ma jiro. Waxaa kale oo xeer noo ah in isla maalintii la diro lacagta maalintaas la qabtay.
Habkaasi waa sida aad u shaqeysaan. Laakiin caddeyn ma haysaan dadkii lacgta loogu talo galay in ay gaartay?
Annagu waan diidnay in video laga duubo ama sawirro laga qaado dad masaakiin ah oo lacag saddaqo ah loo qeybinayo. Gobollada Soomaaliya oo dhanna wey noo siman yihiin. Dadka saddaqada la baxayaa annaga ayay na aamminaan. Qaar tiro yar oo qof iyo laba ah oo dacaayad naga sameeyaana ma ahan kuwa saddaqo la baxa.
Dad shaqeysta ayaan nahay. Sabab annaga oo soomman aan dariiqa u wareegno oo lacag u uruurinno ma jirto oo aan ka ahayn saddaqo nalaku aamminay in aan masaakiin gaarsiino.. Waxaan haynaa sheekooyin badan sida nin makhaayad aan dooneynay in aan dadka jooga lacag ka ururinno buuq nagu furay. Markii dambe inta aan meel gooniya ula baxay ayaan u sheegay waxba yuu bixin laakiin in uu i siiyo magaca qof miskiin ah oo Soomaaliya jooga. Nin sabool ah oo indhana la’ ayuu nambarkiisii i siiyay. Ka dibna markii uu ogaaday in aan ninkii lacag u dirnay aad ayuu u farxay. Hadda wuxuu ka mid yahay ragga lacagta soo ururiya Ramadaan kasta.
Wakiilladiinnu waa meeqa ruux?
Waxaan leennahay 55 danjire oo ku baahsan dalal fara bada. Oo mid waliba uu leeyahay mutaddawaciin la shaqeeya.
Dowladda Soomaaliya hey’ad aad la shaqeysaan ma jirtaa?
Marka laga tago danjirayaasha iyo wakiillada Soomaaliya, ma jirtaa cid kale oo gacan ku siisa?
Farayre, Fiska, Bashiir, Maxamed Yaxye (Fadhi Liibaan)
Fanaanniinta badan ayaa gacan ka geysta sida heesta furitaanka. Farxiya Fiska ayaa hadda ka hor hees noo qabatay. Sidoo kale Abwaan Maxamed Yaxye, Cabdixakiin Farayare iyo Abwaan Koofiyow ayaa ayaguna ka qeyb qaatay. Dhammaantood waan u mahadcelinayaa waayo heesuhu kor ayay u qaadeen lacagta aan qabaneyno.
Heesta Furitaanka! Furitaanka maxay?
Xayaysiinta TV – ga ee Walaal Afuri.
Mustaqbalka maxaad damacsan tihiin?
Haddaan nahay diaspora, waxaa jira xaflado waaweyn oo ay dadka qaar abaabulaan, oo ay u sameeyaan madaxda dalka ee dibadda socdaal ku yimaada. Kharash badan ayaa ku baxa xafladahaas. Qaar ayaa jaakado, kabo iyo lebbis kale u iibiya madaxdu marka ay halkan soo booqato.
Rajadeydu waxay tahay waxaas maalaayacniga ah dadka abaabula in aan ku dhiirri gelinno in ay wakhtigooda iyo lacagtooda ay saddaqeystaan oo ay masaakiinta Soomaaliyeed gaarsiiyaan. Waxaan rabaa in ay ayagu barnaamijkan nagala wareegaan ka shaqeyntiisa, annaguna aan dusha ka ogaanno, wixii talo loo baahan yahayna aan bixinno.
Maxaad ka baratay howshaan?
Waxaan ka bartay in dadka Soomaaliyeed ay gacan furan yihiin. Saddaqo bixintana ay jecel yihiin. Waan ku faraxsan ahay waana uga mahadcelinayaa. Waxaan rajeynayaa in ururrada badan ee Soomaaliyeed ee ka jira Yurub iyo Woqooyiga Ameerika ay nagu soo biiri doonaan. Howsha Walaal Afuri waxay socotaa bil keliya sannadka oo dhan.
Posted by Yusuf Garaad at 01:51:00